OGM ga-enweta ndị gụsịrị akwụkwọ sekọndrị 122 | RayHaber | raillynews
HomeGeneralỌrụOGM ga-enweta ndị gụsịrị akwụkwọ sekọndrị 122
15 / 05 / 2020 Ọrụ, General
ogm ga - eme ma ọ dịkarịa ala ndị ọrụ gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị
Onye mgbasa ozi nke Oke ohia biputere mgbasa ozi. Nkwuputa a bipụtara n’okpuru okwu a bụ “Forestrylọ Ọrụ Ọrụ Ugbo na Ọhịa, Direlọ Ọrụ Ọhịa na ,lọ Ọrụ Mgbasa Ozi, Ntinye akwụkwọ gbasara ndị ọrụ 2020” gụnyere ndị ọrụ gọọmentị 122 n'etiti ndị na-emecha ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Iji mezuo ọnọdụ niile ekwuru n’okwu 657 nke Iwu Nke 48.
Mgbe ị na-arụ ọrụ na ọnọdụ nke ndị ọrụ nkwekọrịta dị ka paragraf (B) nke Nkeji edemede 657 nke Iwu Nke 4; Ndị ọrụ na nkwekọrịta tinye n'ọrụ na paragraf (B) nke isiokwu 1 nke Iwu nke 657 yana mkpebi nke Council nke Minister nke 4 banyere ndị ọrụ nkwekọrịta ọrụ ha agwụla ma ọ bụ ndị tinyere akwụkwọ maka itinye ọnọdụ n'ọnọdụ ndị ọrụ nkwekọrịta na Annex-6.6.1978. Ekwesịrị iburu n'uche na usoro nke dị na paragraf nke atọ na nke anọ nke Annex 7 nke ụkpụrụ gbasara ọrụ a ga-etinye ya. A ga-ahọpụta ndị edobere n'ọnọdụ ndị a maka ndị na-adabaghị na nha anya ndị ahụ akọwapụtara na paragraf nke atọ na nke anọ nke Mmekọ Annex nke ụkpụrụ nke Ọrụ Ndị Ọrụ.
Agaghị anabata ntinye nke ndị na-ebughị ma ọ bụ dowe akara ama akọwapụtara. Na mgbakwunye, nkwekọrịta ndị a ghọtara na ha nwere akwụkwọ adịgboroja / adịghị mma nke ha nyere site na ụbọchị ọ bụla nakwa na ha akwadola akwụkwọ ụgha ga-adaba na iwu megidere ha, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ebinyela nkwekọrịta ma kwụọ ụgwọ ahụ, ụgwọ a ga-akwụ ụgwọ site na mmasị iwu.
OGWU AKW .KWỌ AKA
Inata akara ngosi kacha nta nke 2018 na KPSSP3 na KPSSP94, gụnyere ndị otu KPSS (B) na 60,
Agaghị agafe afọ 36 dị ka ụbọchị ikpeazụ ịchọrọ,
Maka ndị gụsịrị akwụkwọ na ngalaba ọ bụla nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma tinye aka n'ọnọdụ Onye Ọrụ Nkwado (Ọkwọ ụgbọala);
Inwe ikikere C-k
Maka ndị na-arịọ akwụkwọ maka ọkaiwu;
Inwe akwukwo ikike
CDlọ akwụkwọ praịmarị TCDD gụsịrị akwụkwọ na ndị ọrụ ọha na nkwarụ E Bipụtara Nkwupụta curegbapụta!
TCDD N'ụlọ akwụkwọ nchịkwa 363 nke na - agụghị akwụkwọ na - agụghị akwụkwọ na - agụnye ndị ọrụ (Ngwa Malite)
TÜVASAŞ ga - eburu ndị ọkwọ ụgbọala, ndị isi na ndị ọkachamara dịkarịa ala, dịkarịa ala
Ndị ọrụ gụsịrị akwụkwọ na TÜVASAŞ ga - anata ndị ọrụ 26!
TCDD na-aga n'ihu na-adọta ndị ọrụ nke ọ dịkarịa ala ụlọ akwụkwọ sekọndrị
Ngwa TÜDEMSAŞ maka nchịkọta nke ndị gụsịrị akwụkwọ na kọleji dịkarịa ala
TÜVASAŞ Ọ dịkarịa ala, Usoro Ọkachamara nke Ụlọ Akwụkwọ Gụsịrị Akwụkwọ Maka Ndị Ọrụ Nchịkọta 40 malitere
Ọrụ na-aga n'ihu maka Ngwaọrụ MR nke Mbụ
Defensedọ aka na ntị na Nchebe Iwu Iwu (HERIKKS)
TCDD Transportation Inc. ịzụta ndị ọrụ nkwarụ
TCDD 170 Transport Public Personnel Officer Mee a Ịzụ!
Nlekọta 122 na Ụlọ Ọgwụ na Muğla
TCDD General Directorate High School na gụsịrị akwụkwọ 295 na-adịgide adịgide Ọrụ
Map nke TCDD High Speed ​​Train